May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၄၂)
ထပ်တူလိုက်ပါ မောပန်းစွာ ခံစားရင်း...ဖတ်ပြီးကြောင်းပဲ ပြောသွားနိုင်ပါတယ်...
ဇာတ်သိမ်းကြိုသိနေတာတောင် အခုမှ ဟင်းးးး ချ နိုင်တော့တယ်။
အမရေ ခံစားချက်ရှိနေလို့ထင်တယ်။ ဒီအပိုင်းတွေမြန်မြန်ရေးဖြစ်တယ်နော်။ ဖတ်ရတဲ့ ညီမတို့တောင်ရင်မောရတာ။ တကယ်ကြုံရတဲ့အမတို့ဆို ပိုဆိုးမှာပဲဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။ ဒီလမ်းကို သွားလိုက်၊ ပြန်လိုက်လုပ်နေရတဲ့ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေအစားရင်နာလိုက်တာ။ အရင်းစစ်တော့ အမြစ်မြေကလှန်ဆိုသလိုပဲ မပြောချင်တော့ပါဘူး။
ရောက်သွားတော့မှ သက်ပြင်းချနိုင်တယ်။ ခရီးကြမ်းကို မသွားဖူးတော့လည်း နုနေတာပေါ့။ အဲလို ခရီးမျိုးကိုဖြတ်ပြီး စွန့်စားကြရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘ၀ကို အများကြီး စာနာမိပါတယ်။
"ကျမရဲ့ ခေါင်းမာမာနဲ့ အလွယ်တကူ အလျှော့မပေးတတ်တဲ့ အကျင့်နဲ့ "
This is the essential force owned by all successful people.
ဆရာမ Happy Ending ကို (သိနေပေမယ်.) မျှော်နေပါတယ်.... ဒါပြီးသွားရင် အခုလက်ရှိ အတွေ.အကြုံတွေဆက်ရေးပါအုံးနော် :P
အစ်မရေ.. မောလိုက်တာနော်..အစ်မ ခရီးကြမ်းကြီးက ပြန်လာလို့..ဆိုတဲ့ သတင်းစကား ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ မြင်ရတော့မှ..တော်ပါသေးရဲ့လို့..အဲဒီတုန်းက စိတ်ပူနေတာ..
စာရေးဆရာမဆိုတော့ လက်တွေ့ကျကျ အသက်ပါပါ ခံစားချက်ထိထိ ရေးလို့ရအောင် သဘာဝကံကြမ္မာက အဲ လိုဖြစ်အောင် အဲဒီနေရာကို ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တာပါ။အဲ ဒီ အတွေ့အကြုံသာမရခဲ့ ရင် ဒီဘလော့က ဒီလောက် အသက်ဝင်မယ်မထင် ပါ။ မေ့သမီးပြောသလိုပါပဲ အရင်းစစ် အမြစ်မြေက လှန် ဆိုတာလို ဒီအကြောင်းတွေကို နေပြည်တော်က အကြီး အကဲ ကြီးများသိစေချင်ပါတယ်။လူတစ်ဖက်သားပေါ် မှာ အထင်သေးလွန်း ကြီးလွန်းတတ်တဲ့ ထိုင်းတွေရဲ့ စရိုက်ကလည်း ဒီနေရာမှာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။
သည်လိုဘ၀တွေ တကယ်ရှိနေခဲ့တာ အနှစ် ၂၀ မကတော့ပါဘူး... သူတို့ခမျာ သည်လိုဘ၀တွေ ရှိကြောင်းကို လူတကာသိအောင် ပြောပြနိုင်ခွင့်လည်း မရှိခဲ့ကြရှာဘူး...
ခုတော့ သည်ဘ၀တွေရဲ့ တစွန်းတစကို ကျန်သူတွေ သိရှိသွားအောင် အသေးစိပ် မှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့တဲ့ အတွက် သည်လူတွေက မမေငြိမ်းကို ကျေးဇူးတင်နေကြမှာပါ...
ရင်နာနာနဲ့ နားထောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရင်နာနာနဲ့ပဲ ဖတ်နေခဲ့ရတာပါ...
ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေ သည်လိုဘ၀မျိုးတွေနဲ့ ထပ်မကြုံကြရပါစေနဲ့တော့လို့ပဲ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်...
ဖတ်ပြီးတော့ မောသွားပါတယ် ဆရာမရေ။ ကံကြီးပေလို့ သာပဲ။ ဘေးမသီရန်မခရောက်လာတာပဲ တော်သေးတာပေါ့။
၄၁ နဲ့ ၄၂ ကို ပေါင်းပြီး ဖတ်သွားတယ်။ ဆရာမတို့ အတွေ့အကြုံကို ဖတ်ရတာ ကျွန်မတို့ ရှေ့တန်းဒေသမှာတုန်းက စစ်တပ်ကုန်းတကုန်းကို သွားတိုက်ဖို့ အသွားမှာ ရွာသားတွေသိရင် သတင်းပေါက်ကြားမှာ စိုးလို့ နေ့ဘက်မှာ လူသွားလမ်းကမသွားပဲ တောနင်းပြီး သွားပေမယ့် ညဘက်ဆို အရောက်မြန်အောင်ဆိုပြီး လူသွားလမ်းမှာ ၀င်ခိုးသွားတဲ့အချိန် တယောက်ယေက် ဖြတ်လာရင် လမ်းဘေးချုံပုတ် တွေမှာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ပုန်းရတာထက်တောင် သဲထိတ်ရင်ဖို ဖြစ်ရသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ကို ရွာသားတွေ့သွားရင် လုပ်မယ့်အလုပ် မအောင်မြင်မှာပဲ ရှိနိုင်ပြီး ဆရာမတို့ကို တွေ့သွားရင် ပြန်ပို့ခံရမှာနဲ့ အချုပ်ထဲရောက်မှာ ဆိုတော့ ပိုအန္တရယ်များပြီး ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ ဘ၀မှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲမှုတွေကို တချိန်ချိန်မှာ ကြုံတွေ့ရမှာ သေချာပါတယ်။ သန်းခေါင်ထက် ညမနက်ဆိုတဲ့ စကားပုံရှိတဲ့အတိုင်း အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေကို အဆုံးစွန်ထိ ကြုံတွေ့ရပြီးနောက်ပိုင်း ထပ်ကြုံစရာဆိုလို့ အကောင်းပဲ ဖြစ်တော့မှာပါ။ ၄၃ ကို စောင့်ဖတ်နေမယ်။
မ ရေ… ခုမှပဲ အသက်ရှုမိတော့တယ်… သမီးနဲ့ သားလေးတွေ အသက်နဲ့ မမျှ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတာ သနားစရာပါ… ကျွန်မ အဲဒီအဖြစ်တွေ တကယ်မသိလိုက်ဘူး… ကိုပေါပြောလို့မ တို့ မိသားစု green card ပေါက်တယ်ဆိုတာ သိရတော့ မ ဘလော့ပေါ်က ပျောက်နေတာ ဒီကိစ္စတွေ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်လို့ထင်တာ… အဲဒီလို နေ့ ရက်တွေရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နေရတယ် မထင်ဘူး… တခု သတိထားမိတာက မ ရဲ့ ကံကိုပါ… ဘယ်လောက် အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရနေရ ကယ်တင်ရှင်တယောက်ယောက်က ပေါ်လာတာပဲနော်… ထူးခြားတဲ့ကံပါပဲ မ ရယ်… မ မှာ တကယ့်မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ရှိတာပါ… အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်… မ ရေ… တောင်းဆိုထားသလို ဇာတ်သိမ်းလေးကို ပျော်စရာ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ နော်… မြသီလာကို ဘယ်လောက်ထိ သံယောဇဉ်တွယ်မိနေသလဲဆို ဇာတ်သိမ်းသွားတာ နှမျောနေမိတယ်…
မြသီလာ ၄၁ နဲ့ ၄၂ လာဖတ်တာပါ ဆရာမ။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အသေးစိတ် အားလုံးဖတ်ဖို့ ရေးထားတာ မှတ်တမ်းတခုလိုပါပဲ။